कसरी सुत्नेको व्यक्तित्व कस्तो हुन्छ ? कता फर्केर सुत्ने ? जान्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
यो गर्भास्थ शिशुको जस्तो दायाँ वा बायाँतिर कोल्टे परी टाउको, हात र खुट्टा खुम्च्याएर सुत्ने स्थिति हो। यो स्थिति प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरु बाहिर धेरै कठोर तर आन्तरिक रुपले अत्यन्त कोमल मन भएको पाइएको छ। यस्ता व्यक्ति पहिलो पल्ट कसैसँग मिल्दा धेरै नखुल्ने, अल्पभाषी र लज्जालु लाग्न सक्छन् तर सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै गएपछि चाँढै सामान्य भई घुलमिल हुन थाल्दछन्। यो आसनको सबैभन्दा सामान्य स्थिति हो।
सर्वेक्षणमा सामेल १५ प्रतिशत सर्वेक्षित व्यक्तिहरु दायाँ अथवा बायाँतिर कोल्टे परेर हातलाई शरीरसँग टाँसेर सामानन्तर राखी खुट्टा नखुम्च्याई सुत्ने गरेको पाइएको छ। यो सयन स्थितिमा सुत्नेहरु सोझा–सिधा, सामान्य, सामाजिक र शान्त प्रकृतिका हुन्छन् भने नचिनेका व्यक्तिहरुमा पनि तुरुन्त विश्वास गर्न पछि हट्दैनन्। फलतः यिनलाई कसैले पनि उल्लु बनाउन सक्छ। यो स्थितिमा सुत्ने व्यक्तिहरु अत्यन्त सरल हुने भएकाले यस आसनलाई सोझाहरुको सयन आसन पनि भनिन्छ। ढाडलाई नमोडी सुत्नुपर्ने भएकाले यस स्थितिमा सुत्नेहरुमा कम्मर तथा ढाडको समस्या कम भएको पनि पाइएको छ।
सर्वेक्षणमा सामेल भएकामध्ये १३ प्रतिशतले यो सयन विधि अपनाइएको पाइयो। यस्ता व्यक्तिहरु खुट्टा नखुम्च्याई कोल्टे परेर, हातलाई शरीरको लम्बवत, अगाडिपट्टि सिधै वा हल्का मोडेर सुत्ने गर्छन्। यो स्थितिमा सुत्ने व्यक्तिहरु खुला मिजासका तर संदिग्ध तथा सन्काहा मनस्थितिका, निर्णय गर्न लामो समय लिने तर एकपटक निर्णय लिइसकेपछि सायदै बदल्ने, हरेक घटना र परिस्थितिलाई फाइदा–बेफाइदाको तराजुमा तौलिने र नयाँ कुरा तुरुन्त सिक्नसक्ने क्षमताका हुन्छन्। प्रा क्रिसका अनुसार यो सयन विधि अपनाउनेहरुमा एसिडिटी र निद्रामा निसास्सिने समस्या धेरै पाइएको छ।
सर्वेक्षणमा सामेल ८ प्रतिशत व्यक्ति यस स्थितिमा सुत्ने गरेको पाइयो। यो स्थितिमा हात शरीरसँग अभिन्न राखी, ड्युटी गरेको सैनिक जसरी उत्तानो परेर सुत्ने प्रवृतिका हुन्छन्। यस्ता व्यक्ति शान्त प्रकृतिका, अलग्गै रहन चाहने, कसैसँग हत्तपत्त नखुल्ने, सानातिना कुरामा नअल्झी आफ्नो र अरुको उच्च भलाइ चाहने प्रवृत्तिका हुन्छन्। घुर्ने, सुतेको समयमा निसास्सिने र गहिरो निद्रा लिन नसक्ने जस्ता समस्या यो सयन विधि अपनाउनेहरुमा पाइएको छ।
सर्वेक्षणमा सामेल ८ प्रतिशत व्यक्तिहरु यस आसनमा सुत्ने गरेको पाइयो। यस्ता व्यक्तिहरु पेटको बलले सुत्ने तथा सुतेका अवस्थामा हात सिरानको आसपास राख्ने गर्दछन्। यो सयन विधि अपनाउनेहरु मिलनसार, बहिर्मुखी, चाँडै उत्तेजित भइहाल्ने, कठिन परिस्थितिमा अत्तालिने, व्यक्तिगत आलोचना नसहने, आन्तरिक रुपले धेरै नाजुक र घुसघुसे हुन्छन्। कामुकता र चञ्चलता यस आसनमा सुत्नेहरुको एउटा विषेशता हो भने पातलो छाला र मजबुत पाचनशक्ति अर्को विषेशता हो।
सर्वेक्षणमा सामेल व्यक्तिहरुमध्ये यस आसनमा सुत्नेहरुको सहभागिता ५ प्रतिशत थियो। यस स्थितिमा सुत्ने व्यक्तिहरु सहयोगी भएकाले प्रायः राम्रा मित्र साबित हुन्छन्। यो स्थितिमा ढाडको बलले, उत्तानो परी, खुट्टा फट्याएर, हात तकियाको आसपासमा राखी स्टारफिस माछाको आकृतिमा सुत्ने गरिन्छ। यो सयन विधि अपनाउनेहरु प्रायः सबैको कुरा सुन्न तयार हुन्छन्। यिनीहरु आकर्षणको केन्द्र बन्न चाहँदैनन्। स्टारफिस स्थितिमा सुत्नेहरुमा घुर्ने (स्नोरिङ), दुस्वप्न देख्ने र निद्रामा निसास्सिने समस्याबाट ग्रसित भएको पाइयो।
कसरी सुत्दा शरिरलाई सहज हुन्छ? कता फर्केर सुत्ने
सुत्ने धेरै तरिकाहरू छन्- ढाड तर्फबाट, छाती तर्फबाट, दायाँ फर्केर र बायाँ फर्केर- र यो सबैले तपाईँको स्वास्थ्यमा असर गर्दछ। माथि फर्केर अथवा ढाड तल पारेर सुत्नु विशेष गरी दम भएकाहरूको लागि खतरनाक हुन्छ, किनकी यसरी सुत्दा तपाईँको स्वासप्रश्वासमा बाधा पुर्याउँदछ। तथापि उत्तानो परेर सुत्नु सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ।
दाहिने फर्केर सुत्नाले तपाईँको पाचन प्रक्रियालाई बिगार्दछ, ग्यास्ट्रिक बढ्छ भने देब्रे फर्केर सुत्नाले भित्रीअंग कलेजो, पेट, फोक्सोमा दबाब पुग्छ तर पाचन प्रक्रिया भने सुधर्छ। गर्भवति महिलालाई रक्तस्राव कम होस भनि देब्रे फर्केर सुत्न सल्लाह दिने गरिन्छ।
देब्रे फर्केर सुत्दा स्वास्थ्य स्थितीमा सुधार हुने र मानिसको जीवन पनि बच्न सक्ने चिकित्सकहरूको धारणा रहेको छ। हलिस्टिक चिकित्साविधीमा, शरीरको देब्रे भागलाई लसीका (Lymphatic) को प्रवल पक्ष मानिन्छ, र देब्रे तर्फ फर्केर सुतेको बेला तपाईँको शरीरले विषादी, लसीका तरल पदार्थ (Lymph fluid) र फोहोरहरूलाई फिल्टर गर्न बढी समय पाउँदछ। थोरासिक डक्ट (thoracic duct) र लसीका नोडको सहायताले यो फिल्टर कार्य भैरहेको हुन्छ।
तर, दाहिने फर्केर सुत्नाले तपाईँको लसीका प्रणाली (lymphatic system) ले ढिलो काम गर्दछ, र यस्तो हुनु खतरनाक मानिन्छ। किनभने, यसरी ढिलो काम गर्ने लसीका प्रणालीले तपाईँको शरीरमा भएका विषादीहरूलाई फिल्टर गर्न सक्दैन र लसीका तरल पदार्थलाई शरीरभरी फैलाउन असमर्थ हुन्छ। यसरी शरीरमा विषादी जम्मा हुँदै गएपछि खतरनाक समस्याहरू आउन सक्छन्।
लसीका प्रणाली भनेको शरीरको सञ्चार प्रणालीको एक महत्वपूर्ण अङ्ग हो साथै प्रतिरक्षा प्रणालीको अत्यावश्यक भाग हो। यो लसीका प्रणाली विभिन्न लसीका वाहिका (lymphatic vessels) हरूको समग्र नेटवर्कले बनेको हुन्छ जसले लसीका तरल पदार्थ (lymph fluid) लाई (‘लिम्फ’- ल्याटिन भाषामा ‘पानी’) मुटुको दिशातर्फ पुर्याउने काम गर्दछ।
देब्रेतर्फ फर्केर सुत्ने बानी सिक्नुहोस्-
यदि तपाईँलाई देब्रेतर्फ फर्केर सुत्ने बानी छैन र यो बानी कसरी बसाल्ने भन्ने बारे सोच्नुभएको छ भने ढुक्क हुनुहोस्। केही समय लाग्न सक्छ तर यसको अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईँको शरीरले यो बानी सजिलै सिक्न सक्छ।
केही टिप्सहरू यसप्रकार रहेका छन्ः
-देब्रेतर्फ फर्केर पल्टिनुहोस् र पछाडि पट्टी पुरै ढाडलाई पुग्ने गरी सिरानी अथवा सिरक राख्नुहोस्। यसो गर्दा राती अर्को तर्फ फर्किने सम्भावना कम रहन्छ।
-तपाईँको खाटको दिशा पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, यसो गर्दा पनि देब्रेतर्फ फर्केर सुत्न मद्दत पुग्दछ।
-अर्को चलाख उपाय भनेको तपाईँको दाहिने तर्फ मधुरो बत्ती बालेर राख्नु हो। साधारणतयाः सुतेको बेला तपाईँको शरीर उज्यालो तर्फ फर्किन चाहँदैन र देब्रेतर्फ फर्किएर सुत्न सहज हुने गर्दछ।
Don't Miss it के तपाई सागसब्जीको बोक्रा छोडाएर खाने गर्नुहुन्छ ? थाहापाउनुहोस् सागसब्जीको बोक्रा छोडाएर खाने कि नछोडाइ खाने ?
Up Next बालकालिकाको कान किन पाक्ने गर्छ ? बेलैमा उपचार नगरे यस्ता असर देखा पर्नसक्छ